> Resource > Video > Sida loo dar Audio libdhi in Saamaynta
Marka ku daray gabay ku haboon video ah, waxaad inta badan laga yaabaa inay la bilowday kadis ah in uu noqon karaa mid adag dhegaha. Si loo xaliyo dhibaatada, waxaad isticmaali kartaa ka baxeysa ee audio dhaqan si tartiib ah u kordhi mugga codka, kaas oo la simi doonaa xuduudaha track maqal ah. Haddii aad rabto in aad ku darto ka baxeysa ee saamaynta in wadada audio ku qasabno yar, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waa doorasho wanaagsan. Clip kasta oo maqal ah ee barnaamijkan si fudud loo yaraaday kartaa adiga oo aan dadaal aad u badan. Ma doonaysaa in ay isku day ah? Just raac tilmaan faahfaahsan hoos ku qoran si aad u aragto sida ay ku darto soo daadan audio dhaqan.
1 barnaamijka dejinta aad video
Ku rakib iyo abuurtaan Video Editor iyo dooran "Import" button ka menu ugu sareeya. Markaas suuqa kala browser ah furayaa aad dedeg video bartilmaameedka ama file maqal ah. Dooro file aad rabto iyo riix "Open" button. Markaas faylka la galin doonaa maktabadda. Waxa kale oo aad si toos ah u soo jiidi kartaa jeedi faylka si maktabadda barnaamijka.
2 dar ka baxeysa audio dhaqan si video
Ka dib markii in, jiidi jeedi video ama file maqal ah in waqtiyada u dhiganta. Click on Double file bartilmaameedka iyo in "Audio" column tagaan. Markaasay aad arki doonaa dhowr goobaha sida Volume, libdhi In, libdhi Out oo dhexdiisa menu xaaladda. Raadi ee "libdhi In" doorasho ka dibna jiidi bar slider ee midigta ama inay gacanta ku dhow ka baxeysa ee dhererka ka hadhay. Ka dib markii in, ka ciyaaro daafaca aad video iyo qabsato ka baxeysa ee ilaa aad gaarto codka la doonayo.
3 Save the video cusub
Haddii aad tahay qof ku qanacsanayn natiijada, dhufatey "Abuur" badhanka si loo badbaadiyo file cusub. Halkan waxa ku jira dhawr fursadood oo wax soo saarka aad u:
Keydso video files galay qaabab kala duwan, sida wmv, AVI, MP3, MKV oo dheeraad ah;
Save inuu ciyaaro qalab kala duwan sida iPhone, iPad, iPod, PSP, Zune, iwm;
Kolkiiba geliyaan aad video in YouTube ama Facebook wadaaga la saaxiibo dheeraad ah;
Guba si DVD ilaalinta fiican.
Dooro mid ka mid doorasho ka tab kala duwan; ka dibna riix "Abuur" mar iyo suuqa kala goobaha qaab waxaa firfircoonaan. Sug ilaa dhowr ilbiriqsi ka dibna file laga badbadeley iyo si toos ah furi doonaa meel wax soo saarka.
Eeg, waa in si sahlan loo dar ka baxeysa audio dhaqan si aad video. Hadda download Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) oo ku darto saamaynta dheeraad ah sida aad jeceshahay!
Halkan waxa kale oo waa tutorial video ah:
Sida loo abuuro maaskaro ka dib markii qaab la Raadka
Talinayo Video qaabab huriyaan dab
Top 30 Sports Video Goobaha si uu u daawado Sport Games
Sida loo Play WMA kasta oo ku Android Qalabka Si fudud
Sidee ku cadaadisaa MKV Faylal ay la Quality sameecadda ah ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)